SOMALITALK.COM: Meles Zenawi oo Dhabarka u Jeedin doona DFKMG
In DFKMG ay hanato dalka oo awood yeelato "ma aha shardiga ku xiran ka bixitaanka Itoobiya" sidaas waxaa yiri Zenawi
Tarjumadii SomaliTalk.com | August 28, 2008
Itoobiya waxay isu diyaarineysaa in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya xitaa haddii aysan degin ama noqon mid xasilan Dawladda Kumeelgaarka ee ay ciidamada u direen 20 bilood ka hor, sidaas waxaa yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya, sida ay qortay jariidadda Financial Times caddadkeedii Khamiis (August 28, 2008).
Meles Zenawi waxa uu jariidadda u sheegay "in aysan miskaha iskaga xiriirsanayn" iyaga (Itoobiya) iyo "Dawladda Soomaaliya".
Hadalkaas waxa uu yiri xilli uu siyaadayo walaaca Itoobiya ka qabto dagaalka dabada dheeraaday iyo hantiga dhaqaale ee kaga baxaysa ku jiritaankooda Soomaaliya, ayey tiri Financial Times.
Hadalkaasi waxa uu calaamad u yahay isbedelka ku yimid siyaasadda Itoobiya, hadalkaas oo ka duwan in hore Itoobiya u sheegtay in ay Soomaaliya joogi doonaan ilaa inta ay DFKMG si sugan u xasileyso oo xukunka hantiyeyso.
Itoobiya waxay ka huleeleysaa xilli ay Soomaaliya ka jiraan sharci darro iyo rabshado, taas oo wadanka ugu burbursan adduunka ka sii dhigi doonta mid sii tiimbada dhibaato ay mar hore hay'adaha gargaarku sheegeen in ay malaayiin qof qarka u saaran yihiin masiibo bini'aadaminimo.
Laakiin, ayey tiri jariidaddu, dadka arrimaha ka faallooda ee ku sugan Addis Ababa waxay yiraahdeen in maanta ay tahay marka ay ugu dhowdahay in Itoobiya la baxdo ciidankeeda.
Meles Zenawi waxa uu yiri Itoobiya waxay samayneysaa wax kasta sidii ay u caawin lahayn Dawladda Kumeel gaarka, taas oo awoodeedu ku kooban tahay qayb kamid ah Muqdisho, sidii ay u noqon lahayd mid xoog badan oo waxqabad leh. Laakiin waxa uu intaas raaciyey "Taasi ma aha shardiga ku xiran ka bixitaanka (Itoobiya)", waxana uu Zenawi hadalka ku xoojiyey in ballan qaadkoodii uusan ahayn mid iska furan.
"Masuuliyaddanada ku addan nabadda Soomaaliya waa hal arrin oo keliya. Waxaa kale oo jira baahidayada gaarka ah, oo ay ku jiraan dhaqaalaha," ayuu yiri Zenawi, oo intaas ku daray "Hawlagalka (Soomaaliya) waxa uu noqday mid aad iyo aad ugu kacay qiima sare, sidaas daraadeed waa in aan miisaano cadaadiska dhinaca maxalliga (gudaha Itoobiya) iyo dhimaca kale cadaadiska Soomaaliya, oo markaas la nimaadno xal miisaaman."
Jariidadu waxay tiri: Baahida daran ee ay Itoobiya u qabta in ay soo afjarto hawlagalkeeda militari ee Soomaaliya waa arrin ka dhalatay qiimaha kaga baxay.
Markii la weydiiyey qorshihii asalka ahaa ee ahaa in ay Soomaaliya ku jiraan muddo kooban in wax ka khaldameen, waxa uu Zenawi farta ku fiiqay reer Galbeedka. Kuwaas oo siyaasad debecsan iyo dhaqaale debecsan siiyey Midowga Afrika nabad ilaaliyaashooda Soomaaliya, kuwaas oo isku soo dubaridey tiro aan ka badnayn afar meelood oo meel ciidamadii markii hore lagu tala galay ee ahaa 8,000 ee askari.
"Ma sii mala-awaalin (rajayn) in beesha caalamku ku faraxsanaan doonaan in ay farqa sii qabsadaan faraska Itoobiya, islamarkaasna ay ka waji detaan muddo aad u dheer," ayuu yiri, isagoo intaas ku daray "Waxaan rajaynayney, oo filaynay... in beesha caalamku ay garwaaqsadaan in ay tani ahayd fursad gaar ah ee nabadaynta Soomaaliya oo ay markaas ka faa'iidaystaan."
Jariidaddu waxsay qortay in dublomaasiyiin reer galbeed ah oo jooga Addis Ababa ay sheegeen in Itoobiya aysan marna fileyn in ay Soomaaliya kala kulmeyso dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, islamarkaasna waxaa dhici karta in aysan ay si ka duwan u qiyaaseen "qaabka ay u shaqeeyaan qabaa'ilku" iyo sida ay isugu xiran yihiin qaabka ehelnimada ku salaysan ee qaybiyey bulshada Soomaaliyeed.
Toddobaadkii hore ayey ahayd madaxweynaha DFKMG, C/laahi Yuusuf iyo ra'iisul wasaarihiisa Nuur Cadde waxa ay tageen Addis Ababa si ay uga wada xaajoodaan khilaafk aiyaga u dhaxeeyey. Talaadadii August 26, 2008 ayey labadoodu kala saxiixdeed qoraal muujinaya in aay wad ashaqaynayaan. (Isha warka: Financial Times Ethiopia signals shift as Somalian war drags on).
Siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya:
Qormadii Wasaaradda Arriamah dibada Itoobiya: Himilada iyo Siyaasadda Amniga Qaranka iyo Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka ee "Dimuquraadiga" ee Itoobiya Akhri
Jariidada ka soo baxda Shiinaha ee Xinhua oo arrintaas ka hadleysey waxay qortay cinwaanka: "Mubarak expresses understanding on Ethiopian intervention in Somalia" oo macneheedu yahay Mubaarak waxa uu muujiyey sida uu u fahamsan yahay Weerarka Itoobiya ku qaaday gudaha Soomaaliya.
Haddaba xeel dheerayaasha Soomaaliyeed waxay muujiyeen sababta uu Mubaarak hadalkaas u yiri in ay salka ku hayso biyaha webiga Niilka.
Waxaa jira heshiis sannadkii 1929 dhex maray dalka Masar iyo Boqortooyadii Ingriiska (oo ku hadleysey codka Sudan maadaama ay xilligaas gumaysaneysey), heshiiskaas oo loo yaqaan "1929 Nile Treaty" waxa uu dalka Masar siinayey xuquuqda ugu badan ee adeegsiga biyaha webiga Nile. Waxaana heshiiskaas markale dib loo eegay sannadkii 1959 (waxaana sidaas dalbatay Sudan). Heshiisyadaas wax tixgelin ah lama siin Ethiopia oo qiyaastii ilaa 80% biyaha webiga Blue Nile ay ka soo bilowdaan [Webiga Niil ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalka Masar waxa biyihiisu ka yimaadaan labada webi ee Niilka Cad "White Nile" oo ka soo bilowda Harada Victoria ee ay wadaagaan Kenya, Tanzania iyo Uganda, iyo Webiga Niilka Buluugga "Blue Nile" oo kasoo bilowda Haarata "Lake Tana" oo ku taal Ethiopia, waxaana webigaas dhanka Ethiopia looga yaqaan "Abay" ama "Giyon".
Labada webi ee Niilka-Cad iyo Niilka-Buluuga waxay ku kulmaan bartamaha magalada Khartuum ee dalka Suudaan, markaas ayey noqdaan Niilka waraabiya beeraha dalka Masar oo ay dagaalka ka xigto haddii biyahaas ay Ethiopia ka faa'iidaysato iyadoo aan Masar lagala tashan]. Sidaas darteed Ethiopia looma ogola in ay mashaariic horumarin ah ka fuliso Webiga Blue Nile ee dalkeeda ka soo bilowda, haddii ay sidaas samayso dalalka Sudan iyo Masar ayaa soo weeraraya Ethiopia oo ah dalal aad u xoog weyn.
Markaas waa in Itoobiya hesho meel kale oo ay horumar ku samayso si ay dadkeeda oo hadda kor u dhaafay 75 million u helaan cunto ku filan.
Haddaba meesha ugu dhow ayaa noqotay dhulka baaxadda weyn ee Soomaaliya maadaama tirada Soomaalidu ay yihiin 9 million oo keliya ayna haystaan dhul ballaaran oo ay maraan Webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo xeeb aad u dheer, sidaasna dadka tirada badan ee reer Itoobiya la soo dejiyo dhulkaas barwaaqada ah.
Hadda August 2008 waxaa Zenawi u caddaaday in aysan soconayn qorshihii Itoobiya ka lahayd dhulka Soomaaliya. (Akhri Siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya: )
Dilal kala duwan oo xalay Loo gaystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugnaa dalka koofur Africa- Aug 28
Cumar dheere: "TFG danta ayaa khasabtey ee anagu ma khasbin,
waxayna arkeen inayna dowlad noqon Karin, waxayna qaadeen ceeb Taariikheed..."
wareysi xiiso badan.. Akhri.. Aug 28